Toca Kitchen, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Toca Kitchen, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Toa ity herinandro ity dia manana ny mari-pahaizana rehetra hitoviana amin'ny teo aloha, izay vitsy ny fampiharana sy lalao no lasa afaka nandritra ny fotoana voafetra. Amin'ireo rindranasa sy lalao vitsivitsy izay misy amin'ity herinandro ity hisintonana maimaimpoana dia tsara ny manasongadina ny Toca Kitchen, avy amin'ireo mpamorona Toca Boca, izay efa noresahintsika taloha tamin'ny fotoana marobe. Amin'ity indray mitoraka ity sy araka ny anarany, ny zanatsika dia hametraka ny tenany ao amin'ny kiraron'ny chef, chef iray izay tsy maintsy hanome sakafo ny endri-dalao.
Araka ny fitambaran-tsakafo natolotray ho an'ireo vahininay, tsara ireo zanatsika, ireto afaka maneho ny fankasitrahany na ny tsy fahafaliany izy ireo (Ny sakafo masira sy masiaka dia tsy dia mampihomehy azy ireo). Ity lalao ity dia kilalao bebe kokoa ho an'ny zanatsika, izay tena tia Master Chef, hanomboka hanao ny voalobony voalohany ao an-dakozia, mamonjy lavitra. Toy ny lalao rehetra avy amin'ity developer ity dia tsy misy fetr'andro, mozika première na isa arakaraka ny sakafo nomanin'ireo vahininay.
Toca Kitchen Features
Toca Kitchen dia manolotra olona hatramin'ny efatra karazana tsy maintsy fahanantsika mba tsy ho noana izy ireo.
Mba hanomanana sakafo dia manana fangaro 12 izahay, akora izay azontsika atambatra amin'ny fomba 180.
Azontsika atao ny manapaka sakafo, mahandro azy, manendasa azy, mahandro azy amin'ny microwave ...
Manolotra antsika maodely tsy mihinan-kena ihany koa ny lalao, izay anaovantsika legioma fotsiny.
Ny sary, toy ny ankamaroan'ny lalao Toca Boca, dia mamela antsika hitantana ny mpiasa sy ny akora amin'ny fomba tena tsotra.
Interface natao ho an'ny ankizy kely.
Tsy misy fividianana fampiharana na dokam-barotra tafiditra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Toca Kitchen, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny Omna 180 Cam HD Camera dia manomboka amidy ao amin'ny Apple Store
Apple dia nanambara ny WWDC 2017 hatao ny 5-9 jona